Sina BRC Welded Fefy harato ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy fehezan-tanana | Pro Fefy
Ny fefy tariby vita amin'ny tariby BRC dia fefy manokana misy fihodinana mahafinaritra ary antsoina koa hoe fefy ambony ambony amin'ny faritra sasany. Izy io dia fefy manjono malaza any Malezia, Singapore, Korea atsimo ho an'ny fampiharana trano sy varotra.
Ny fefy BRC dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fanondrotana ny rafitra telozoro eo an-tampony sy any ambany noho ny fefy vy tariby voaforona mahazatra. Izy io dia fefy vy mampiasa tariby vy lehibe kokoa mifangaro savaivay mba hanoherana ny hatairana any ivelany. Ny firafitra eo an-tampony sy any ambany dia mahatonga azy ho tsara hisarika ny saina. Ary ny tariby vy misy fihenjanana ambony amin'ny rafitry ny harato dia manome rafitra fiarovana avo lenta ho an'ny tranobe. PRO.FENCE mpamatsy BRC fefy vy tariby amina endrika sy loko isan-karazany. 2 koa ny fitsaboana ambonin'ny tany samihafa an'ny savony sy ny vovoka mifono. Izahay dia mividy ny tariby vy vy karbaona sy ny marika vovoka malaza an'ny Akzon Nobel, ary mampiasa ireo fitaovana mandroso mba hikirakira.
Ny fefy mavo BRC dia ampiasaina matetika ho fefy haingon-trano ho an'ny zaridaina, zaridaina, ary zoo, na toy ny fefy fiarovana amin'ny toeram-piantsonana, seranam-piaramanidina, dobo filomanosana, vondrom-piarahamonina sns. Safidy mety izany raha mitady fefy maharitra sy tsara ianao.
Wire Dia .: 3.0-6.0mm
Harato: 50 × 150mm / 75 × 150mm / 50 × 100mm
Haben'ny tontonana: H1200 / 1500/1800 / 2000mm × W2000mm / 2500mm
Paositra: Paositra boribory, Paositra efajoro
Fototra: sakana simenitra, antontany
Fittings: SUS304 / nandrisika
Vita: vita anaty savony / vovoka mifono (Brown, mainty, maintso, fotsy, volondavenona)
1) Ny tontonana harato dia nohosorana voalohany ary avy eo nofafazana elektrostatika teo amboniny. Ka ny fanoherana BRC dia misy fanoherana tsara ny fihafiana.
2) Ny horonan-taratasy dia tsy manome sisiny maranitra na henjana hisorohana ny fahasimban'ny tendron'ny tariby amin'ny olona.
3) Ny endrika manokana eo an-tampony sy any ambany dia mahatonga azy io ho tsara tarehy kokoa sy hiakanjo ny zaridaina. Izy io koa dia manana fahitana tsara hanehoana amin'ny olona ny zaridainanao avy any ivelany.
4) Ny firafitra tsotra dia tsy mila mandany fotoana betsaka amin'ny fametrahana sy fikojakojana.
Item TSY: PRO-11 Fotoana fitarihana: 15-21 ANDRO Orginan'ny vokatra: CHINA
Teo aloha: Fefy Chain Link Ho an'ny fampiharana ara-barotra sy trano
Manaraka: Tontonana fefy vita amin'ny vy vita amin'ny metaly ho an'ny fampiharana aritrano
Tontonana fefy vy vita amin'ny vy ho an'ny maritrano ...